Banyere Anyị - Wuhan Golden Laser Co., Ltd
Focus na laser nwere ọgụgụ isi n'ichepụta
Miri n'ime ụlọ ọrụ mgbanwe mmepụta ngwọta na laser technology
Golden laser - World-ma ama ika nke laser ngwá emeputa.
Ọkaibe customization ike gị kpọmkwem ngwa ụlọ ọrụ.
Wuhan Golden Laser Co., Ltd. e guzobere na 2005 na depụtara na Uto Enterprise Market nke Shenzhen Stock Exchange na 2011. Ọ bụ a digital laser technology ngwa ngwọta na-eweta na-agba mbọ ka enye laser nhazi ngwọta maka uwa ọrụ.
Mgbe ihe karịrị afọ 10 nke na-aga n'ihu mmepe na ọhụrụ, Golden laser aghọwo China si eduga na ụwa a ma ama emeputa nke laser akụrụngwa. Na ubi nke elu-ọgwụgwụ digital laser ngwá n'ichepụta, ọlaedo laser eguzobewo ya na-eduga technology na ika uru. Karịsịa na ubi nke textiles, uwe na ulo oru mgbanwe akwa laser ngwa, ọlaedo laser aghọwo China si eduga ika.
Ilekwasị anya n'inye digital, akpaghị aka na ọgụgụ isi laser ngwa ngwọta.
- Help omenala ulo oru mmepụta usoro kwalite digital, mgbanwe maka otutu development.
Golden Converse na-pụrụ iche na ndị R & D, mmepụta na ahịa nke CO2 laser ọnwụ igwe , galvanometer laser igwe na eriri laser ọnwụ igwe . The ngwaahịa akara na-ekpuchi ihe karịrị 100 ụdị ndị dị otú dị ka laser ọnwụ, laser osise, laser marking, laser perforating, na laser akwa.
Ngwa gụnyere dijitalụ obibi, textiles, uwe, akpụkpọ ụkwụ, na ulo oru akwa, agbara, mgbasa ozi, labelụ-ebi akwụkwọ na nkwakọ, ngwá electronic, ngwá ụlọ, mma, metal nhazi na ọtụtụ ndị ọzọ ọrụ. A ọnụ ọgụgụ nke ngwaahịa na teknụzụ ọbọ mba nchọpụta Kemịkalụ na software nwebiisinka, na nwere OA na FDA ihu ọma.
Mba nke ọrụ
n'ụlọ ọrụ mmepụta ihe
Smart Factory Intelligent Onodi
N'ihi na n'oge gara aga ọtụtụ afọ, ọlaedo laser ime ihe ahụ ahịa choro ọgụgụ isi mmepụta. Iwekota esịtidem akụ nke ụlọ ọrụ, na ikpokọta ozi technology ike ọgụgụ isi ogbako management ngwọta. Mgbe oge nke ọbọ nwere ọgụgụ isi mmepụta, na-emekwa ka ị na mma nke ezigbo oge mmepụta data Chọpụta ike, n'ezie na-mgbanwe, n'ezie na-nlekota oru, nke nta nke nta belata mmadụ aka mgbe mma ngwaahịa mma na nnyefe oge, na-ewetara ndị ọzọ na mma management.
Na-atụ anya ga-eme n'ọdịnihu, ọlaedo laser ga-rube isi ụlọ ọrụ itunanya ka ndị na-eduga atụmatụ mmepe, mgbe niile na-ewusi technology ọhụrụ, management ọhụrụ na ahịa ọhụrụ dị ka isi nke ọhụrụ usoro, na ịhụ na-aghọ onye ndú nke nwere ọgụgụ isi, akpaghị aka na digital laser ngwa ngwọta.
Global ahịa Network
Na esenidụt ahịa, ọlaedo laser eguzobewo a tozuru okè ahịa ọrụ netwọk na ihe karịrị 100 mba na mpaghara na gburugburu ụwa.
- Golden Laser aghọwo ndị kasị ibu ekspootu laser ngwaahịa na China.
ỤFỌDỤ n'ime anyị ahịa
Egwu na-arụ ọrụ NA ANYỊ TEAM'VE mee ka anyị na ndị ahịa!
IHE ahịa KWURU?
"Michelle, m nwere a ọhụrụ nri banyere ọlaedo Converse. Ugbu a, i nwere a mma otu. Joe na Johnson bụ nnọọ ọkachamara na eru. Ha na-aghọta na-arịọ arịrịọ na azịza na oge na assertively. Ekele! N'ezie ị na-nnọọ ọkachamara na ịghọta gị ngwaahịa na-n'ahịa a otutu. "
"Rita, ka mgbe niile gị ahịa ọrụ bụ magburu onwe. Ị ụmụ okorobịa nwere nnọọ ukwuu na ọ bụrụ na anyị mkpa mgbe ọ bụla-agbagbu ị ga-anyị mbụ oku."
"Gị Galvo laser igwe nwere a dị ezigbo mma iyuzucha; bee ma ọ bụ dee (akara) dị nnọọ ngwa ngwa; imewe nke igwe ọma; igwe-egosi a ọma arụmọrụ; mfe iji rụọ ọrụ; mfe ime mgbanwe."
"The igwe dị nnọọ mma. Mr. Robin bụ magburu onwe. Anyị na-enweta na-arụ ọrụ na ya. Nnọọ na-enye aka na ahụ iru ala. M na-achọ anya ịtụ ọhụrụ igwe na-atọ oge ọzọ na-adịghị agbanwe ẹkesikpede. Hope ịhụ ndị ọzọ njikọ na-eme n'ọdịnihu."